YEYINTNGE(CANADA): Monday, March 29
" သူသေ ကိုယ်ရှင် တိုက်ပွဲဝင် " ၂၀၁၀ သင်္ကြန် သံချပ်များနားဆင်ရန်
Thangyat Booklet 2010
NLD သို. ဂုဏ်ပြုခြင်း
ညီမလေးက ပြောတယ် ကိုယ်ကပြုံးနေ ရီနေရင်
လှတယ်ဆိုဘဲ .. ရာဇ၀င်များရဲ. သားသမီးတွေက ..
တန်းဘိုးက ပြောမပြတတ်အောင်ပါဘဲ ...
အဆင့်လောက်နဲ. မရဘူး ...
ရဲဘော်တို. အသင့် ....
" သူသေ ကိုယ်ရှင် တိုက်ပွဲဝင် " ၂၀၁၀ သင်္ကြန် သံချပ်မ...